कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने बारे साउदी सरकारको नयाँ नियम - Sacho Post
२०७८ कार्तिक ११, बिहीबार ११:१० बजे
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब गएका विदेशी कामदारले एक वर्षको अवधि नपुग्दै शर्तसहित रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा गएको मितिदेखि हालको रोजगारदातासँग कम्तिमा १२ महिना बिताएपछि मात्रै विदेशी कामदारले आफ्नो सेवा अर्को रोजगारदातालाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
अब रोजगारीका लागि उक्त मुलुक गएका विदशी कामदारले एक वर्षको समयावधिको पर्खाइ नगरी अर्को रोजगारदाता परिवर्तन गर्न सक्ने छन् । त्यसको लागि केही शर्त बन्देज भने लगाइएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार रोजगारदाताले हालको रोजगारदाताको स्वीकृति पाएको अवस्थामा कुनै निश्चित अवधि नदिई आफ्नो सेवा अर्को रोजगारदातालाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछन् ।
परिमार्जित व्यवस्थाले निजी क्षेत्रका लागि साउदीकरण (निताकत) कार्यक्रममा तोकिएका शर्तहरूको उल्लंघन नहुने गरी रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने छ । यसैबीच साउदी सरकारले २७ ट्रिलियन साउदी रियाल विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने बताएको छ । साउदीले २०३० सम्म स्थानीय अर्थतन्त्रलाई उकास्न १२ ट्रिलियन साउदी रियाल लगानी गर्ने बताएको छ ।
यसमा सरकारी खर्चबाट १० वर्षमा १० ट्रिलियन रियाल प्राप्त गर्ने र ५ ट्रिलियन रियाल निजी उपभोग्य खर्चबाट उठाउने सरकारी योजना छ । यसले उक्त मुलुकमा बृहत रूपमा रोजगारी वृद्धिको सम्भावना बढेको स्थानीय सञ्चार माध्यामहरुले उल्लेख गरेका छन् । मध्यान्ह दैनिकमा खबर छ !
यौनसम्पर्कका लागि उत्तेजित हुन महिलालाई कति मिनेट लाग्छ ? जानी राखौं